Comestibles - 스페인어 - 버마어 번역 및 예문
검색어: comestibles (스페인어 - 버마어)
A que si los pueblos de la tierra trajesenavender mercancías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo. A dejar de cultivar nuestra tierra en el séptimo año yaperdonar toda deuda
ပြည်သားတို့သည် ဥပုသ်နေ့၌ ဥစ္စာ၊ စားစရာ ကိုရောင်းခြင်းငှါ ယူခဲ့လျှင်၊ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်စေ၊ အခြား သော ဓမ္မနေ့ဖြစ်စေ မဝယ်၊ သတ္တမနှစ်တွင် လယ်လုပ် ခြင်းအမှုကိုမပြု၊ ကြွေးကိုအနိုင်မတောင်းဘဲနေပါ မည်ဟူ၍၎င်း၊ ကျိန်ဆိုလျက် သစ္စာဂတိထားကြ၏။
"Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán; cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida, y sus hojas para medicina.
မြစ်ကမ်းနားနှစ်ဖက်၌ စားစရာကောင်းသော အပင်အမျိုးမျိုး ပေါက်ကျလိမ့်မည်။ အရွက်လည်း မညှိုး မနွမ်းရ အသီးလည်းမပျက်ရ။ လတိုင်းအစဉ်နုသော အသီးကို သီးလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သန့်ရှင်းရာ ဌာနထဲကထွက်သတည်း။ အသီးသည် စားစရာ အပိုဖြစ် ၏။ အရွက်သည် အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့ဖြစ်သည်ဟု ငါ့အားပြောဆို၏။
ထိုသို့သူတို့သည် ခိုင်ခံ့သောမြို့များ၊ မြေကောင်း သောပြည်၊ ဥစ္စာနှင့် ပြည့်သောအိမ်၊ တူးပြီးသောရေတွင်း၊ များပြားသော စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်၊ အသီးသီး သော အပင်တို့ကိုသိမ်းယူ၍၊ ဝစွာစားသောက်လျက် အသားဆူဖြိုး၍ ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝခြင်း၌ မွေ့လျော် ကြ၏။
dis (카탈로니아어>스페인어)video blue full bf indonesia (인도네시아어>영어)prolivena (세르비아어>독일어)et frui (라틴어>영어)paráználkodásainál (헝가리어>이탈리아어)countenance (영어>월로프어)ego sum magister (라틴어>프랑스어)mujhe apne pas bula lo (힌디어>영어)mlijeko (크로아티아어>영어)iphakamile (코사어>영어)kadam phool (벵골어>영어)suge dane (일본어>영어)surface (영어>몰타어)克拉 (중국어(간체자)>카탈로니아어)what are in the mixture (영어>말레이어)octadecenyl (독일어>그리스어)sollecito urgente (영어>이탈리아어)kumusta in bicolano (영어>타갈로그어)nejpřednějšími (체코어>히브리어)welcome speech in tamil for christmas (영어>타밀어)thả tim (베트남어>영어)bigad diya (힌디어>영어)uzimajte (세르비아어>타이어)are u busy (영어>네팔어)je te veux tu m'attires (프랑스어>영어)